स्तन आकर्षक बनाउन युवतीहरुको यस्तो तरिका! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /रोचक/स्तन आकर्षक बनाउन युवतीहरुको यस्तो तरिका!
एजेन्सी । घरेलु उपाय गरेर स्तनको आकारलाई उल्लेख्य रूपमा प्रभावकारी तवरले बढाउन सकिएला जस्तो लाग्दैन, तर कतिपय समाजमा ठूला आकारका स्त”नलाई आकर्षक मानिने भएकाले यसलाई ठूलो बनाउन महिलामाथि दबाब हुन्छ । सौन्दर्य सँग आकार तथा आकृति जोडिने भएकाले त्यस्तो भएको हुनसक्छ । त्यसै कारणले संसारभर नै यसलाइ बढाउन वा आकर्षक देखाउन विभिन्न विधि प्रयोग हुने गरिएको देखिन्छ ।
विभिन्न रसायनिक औषधियुक्त मल्हमको प्रयोग अर्को उपाय हो । त्यसबाहेक यसको आकारमा वृद्धि गर्न पम्पको प्रयोग पनि निकै चर्चामा छ । शल्य चिकित्सा गरेर यसको आकार बढाउन सकिन्छ । तर अत्यधिक खर्चका साथै शल्य चिकित्साको कुप्रभावको असर खप्नुपर्ने हुनसक्छ । तपाईंले फोम भएको ब्रा अर्थात् थुनचोली प्रयोग गर्नुभएको छ । याे कसैलाई देखाउनुपर्ने अङ्ग नभै छोपेरै राख्नुपर्ने अङ्ग हो ।
यी युवतीको घुँडामा एउटामा शान्त र अर्कोमा शैतान जस्तो बच्चा देखिएपछि बनिन् संसारभर भाइ’रल
हनिमुनमा रमाइलो गर्न जब श्रीमानले श्रीमतीसंग यस्तो प्रस्ताव राखे !